शब्दकोश: ♪♪ ओझेल-ओझेलमा:
बीस दिनको बिदाइ
२१ मे बुधबारको दिन बन्दको रापले काठमाडौँ खाल्डो उसिनिइरहेको बेला म उदयपुर जाने ताउरमाउरमा प्रबन्ध मिलाउँदै थिएँ (हेर्नुस् तल- 'असार भेट्ने हतार') । बिहानपख एकफेरा काठमाडौँलाई शुभ प्रभात बोलूँ न त भनेझैँ पुतलीसडकछेउछाउ निस्किएको थिएँ म । सडक-सडकमा युवाहरू फाट्टफुट्ट 'चल्न पुगेका' मोटरसाइकललाई हल्लाखल्ला मच्चाउँदै गुरुम्म हूलले छोपेर स्थितिको तहकिकात गर्दै थिए । कोही 'चाबी खोस् चाबी' भन्दै अर्को 'बन्ददाता'लाई उक्साउँदै थियो, कोही भने 'क्या हो, बन्दको दिन बाइक चलाउने ? बन्दको पालना गर्नुपर्दैन ?­' भनेर वाहनधनीलाई थर्काउँदै थियो ।
नयाँ नेपालको आलोकाँचो मञ्चन हुँदै गर्दा हामीकहाँ यस्ता 'बन्ददाता'हरू पश्चिमेली दाता राष्ट्रलाई बिर्साउने तालमा जोशिएर अग्रसर हुन तल्लीन छन् । बन्दको पालना सिकाउने यी बबुराहरू आफूले चाहिँ मुलुकमा लागू गरिएकामध्ये कुन-कुन नियमको पालना गरेका छन्, यिनै जानून ! जे होस् एउटा बन्द बुधबारको प्रत्यक्ष दर्शनले मानिसहरूको बन्द दिमाग पढ्न सकिन्थ्यो ।
आजको जागिरे संसारमा मानिसहरूलाई तलबी बिदा लिएरै भ्याइनभ्याइ छ । अझ के रे, काज बिदा पो भन्छन् त ! मलाई भने बेतलबी बिदा लिनुपर्ने व्यथाले छोएको छ । यसैको लागि ब्लगको यो आँखीझ्यालबाट तपाईँसँग खुसामद गर्न आइपुगेको म । बिदा पाऊँ है ! त्यस्तै बीस दिनको बिदा हुनेछ मेरो । यो ब्लगरको आँखासँग आँखा मिलाइरहने नाताले तपाईँबाट बिदा स्वीकृत गर्नु मेरो धर्म बन्यो । बीस दिनपछिको भेट कतिविघ्न व्यग्रताले भरिएको अनि मह घुलेको होला, अहिल्यै मादकताले लठ्ठ पारिरहेछ । फेरि त झुल्किनु नै छ, पृथ्वीको पोखरीमा घामका पहेँला माछाहरू सलबलाएजस्तै । १९/२० तारिखमै जाने तयारी गरेको म यतिन्जेल अड्किनुपर्‍यो । बल्ल २३ मे को शुक्रबारे साँझमा म पूर्वको भित्री मधेस अर्थात् उदयपुरमा उदाउनेछु ।
म फिर्ता हुनेछु तिमीसम्म,
एउटा इँटको प्लास्टरसँगै
भूगोलको यो पहाडमा
भइरहनेछ अनि फापर खेती...।
© जोतारे धाईबा
मे २२, २००८ (नक्साल)
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, May 22, 2008